Waxay hadda tahay mid aad u xiiso badan Filibiin dhexdeeda qubeys kulul, nasasho kulul oo Kawa ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Filibiin News » Waxay hadda tahay mid aad u xiiso badan Filibiin dhexdeeda qubeys kulul, nasasho kulul oo Kawa ah
Warshadaha Warshadaha • LGBTQ • News • Dadka • Filibiin News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Qubeyska Kawa ee Qadiimiga ah
Dhoolla -tuska Filibiin waa sixir saafi ah dad badan oo adduunka ah, waddankan Bariga Aasiya wuxuu hadda diyaar u yahay inuu soo dhaweeyo booqdayaasha.
Waa maxay sababta aadan u soo jeedin inaad qubeysato Kawa. Waaxda Dalxiiska ee Filibiin waxay ballanqaadaysaa rustic. iyo waayo -aragnimo nasasho leh
Waaxda Dalxiiska ee Filibiin (DOT) ayaa isu diyaarineysa inay soo dhoweyso martida mar kale, waxay si joogto ah u horumarinaysaa waxqabadyo cusub oo socotada si ay u soo maraan iyagoo hubinaya in dhammaan hab -maamuusyada amniga caalamiga ah lagu kulmo meelo kala duwan.
Runtii waa mid aad u xiiso badan Filibiin, iyada oo waxqabadyada ay diyaariyeen DOT si ay u siiyaan khibrad cusub oo gaar ah dalxiisayaasha caalamiga ah. Dowladda Filibiin waxay u diyaarineysaa soo dhaweynteeda socdaalayaasha leh horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ka mid tahay hagaajinta garoomada diyaaradaha ee gudaha iyo kuwa caalamiga ah iyo waddooyin cusub oo hubinaya in si dhaqso leh loo gaaro meelaha gobolkeenna, ”ayay tiri Xoghayaha Dalxiiska Bernadette Romulo-Puyat.
Iyadoo in ka badan 7,000 oo jasiiradood oo siiya khibrad u gaar ah dadka soo booqda, Filibiin waa meel loo socdo si ka duwan midda kale. Haddii ay ku nasato xeebaha ama buuraha, ku raaxaysato nolosha magaalo ee firfircoon, ama ku dhex milmidda dhaqankeeda asaliga ah, waayo-aragnimo kala duwan oo hal-nooc ah dhammaan noocyada safrayaasha.
Halkan waxaa ah siddeed waxqabad oo Filibiin oo si gaar ah u ah mid uu ka tijaabin karo qaybaha kala duwan ee dalka:
1. Baaskiilka agagaarka Intramuros ee Baaskiilka Baasaboorka
Kor u qaad xiisaha baaskiilkaaga adigoo isticmaalaya baaskiilada baasaboorka. Bambike Ecotours waxay fursad u siineysaa inay si ka duwan u sahamiso magaalada Intramuros ee derbiga leh ee taariikhiga ah. Baaskiilada baasaboorkaan waxay ku yimaadaan ikhtiyaarro badan oo loogu talagalay raacitaan ammaan ah oo raaxo leh oo leh Bambassadors oo u dhaqmaya sidii hage ku saabsan soo jiidashada gaarka ah ee Old Manila.
2. Ku soo dhawaanshaha Waddooyinka dabaysha leh ee Banaue oo saaran Baaskiil Alwaax ah
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee loogu raaxaysan karo muuqaalka quruxda badan ee 2,000-sano jir ah ee barxadaha bariis-ka-samaynta ee Banaue? Maxaa yeelay, mootooyin alwaax ah oo ay gacanta ku xardheen isla kooxdii asaliga ahayd, dabcan! Waxaa lagu sameeyay qashin ka samaysan alwaax iyo gogo 'caag duug ah oo duug ah, labadan lugood waxay u socon karaan ilaa 50kph, runtiina waxay marag u tahay farshaxanka iyo xariifnimada dadka Ifugao.
3. Ku Tijaabi Dheelitirkaaga Stilts Bamboo Cebu
Xirmooyinka Kadang-Kadang ama Bamboo waxay u oggolaanaysaa booqdayaasha inay ka arkaan Filibiin aragti yar oo ka sarreysa. Dalxiisayaasha Cebu waxay tijaabin karaan isku dheelitirkooda iyo xawaaraha iyagoo ku boodboodaya laba tolmo oo ka qaybgalaya tartan kooxeed oo ordaya (ama gilgilaya) 100 mitir. Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay ciyaar carruurnimo ilaa jiilba, waxaa loo aqoonsaday inay tahay ciyaar dhaqameed hoos yimaada Laro ng Lahi 1969.
4. Ka Bax Wadada Wadada Lahar ee Pampanga
Qaraxa Pinatubo wuxuu sababay burbur badan oo ka mid ah Bartamaha Luzon, laakiin dadka deegaanku waxay heleen hab ay uga faaiideystaan ​​qulqulka lahar ee ka yimaada foolkaanada waxayna u rogeen meel ay aad u xiiseeyaan dadka xiiseeya ciyaaraha. Socotada leh baahi degdeg ah waxay ku dalban karaan safar waddada ka baxsan 4 × 4 ama mootada oo dhex marta durdurrada iyo dhulka cammuudda ah iyada oo loo marayo mid ka mid ah muuqaalka ugu gaarka ah Filibiin.
5. Ku raaxayso qubeyska Kawa ee Antique
Kawa ama digsi weyn ayaa badanaa loo isticmaalaa in lagu kariyo qiimaha fiesta ee Filibiin, laakiin gobolka Antique, waxay bixisaa khibrad rustic iyo nasasho leh. Goobaha dalxiiska ee buuraleyda ah ayaa soo dhaweynaya booqdayaasha ka dib socdaal ay ku tageen kaymaha Tibiao oo leh qubeys kulul oo ku raaxeysanaya kawa, oo biyo ku dul shidan dab ka samaysan qoryo iyo ubaxyo dhir udgoon leh. Kuwa doonaya inay la kulmaan nooc kale oo daaweyn ah waxay booqan karaan Tibiao Fish Spa halkaas oo ay cagaha ku dhex gelin karaan balli si kalluunku u nuugo oo u nuugo.
6. Booqo Gorgorka Filibiin ee Davao
Kaalay booqo gorgorka weyn ee Filibiin, oo ah kan ugu weyn gorgorka nool ee adduunka. Noocyadan halista ku jira ayaa lagu ilaaliyaa meelaha la xushay sida Meesha Xayawaanka Duurjoogta ah ee Mount Hamiguitan Range ee Davao. Socdaal aad u dhib badan ayaa lagu abaalmariyaa qaddiyad indho -indhayn oo ay ku jirto fursad lagu daawado Filibiin Eagles oo duulimaad ku jira.
Si dhakhso leh wax looga arko, martidu waxay kaloo dooran karaan inay booqdaan Xarunta Eagle ee Filibiin, oo ah kaymo maareyn ah oo ku yaal Davao City oo hoy u ah oo dhalisa Filibiin Filibiin maxaabiis ahaan.
7. Baro Farshaxanka Asalka ee Tolidda ee wareegga dharka Cordillera
Qabiilooyinka kore ee Gobolka Cordillera waxay leeyihiin dhaqan hodan ah oo lagu tolay dharkooda. Socdaalkani wuxuu u keenayaa dadka safarka ah bandhigyo is -dhexgal iyo wargelin leh oo cajiib ah oo laga sameeyay marada laga soo saaray gobolka iyadoo la adeegsanayo suuf iyo fiilooyin kale oo dabiici ah oo la tolay oo la dhex geliyay naqshadihii dhaqameed ee ay soo mareen. Joojinta dalxiiska waxaa ka mid ah tuulooyinka tolidda iyo matxafyada, oo leh fursado lagu aadi karo dukaamaysiga xusuusta ee farshaxannada gacanta lagu sameeyo oo lagu tolo maqaallo cajiib ah oo dhar ah ama lagu daray qaybo qurxin ah.
8. Organic Green Tour (OGT) Wareegga
Wareeggan wuxuu raadraacayaa xididdada cuntada Filibiin iyada oo loo marayo isku-darka booqashooyinka beeraha dabiiciga ah iyo cuntooyinka dhaqameed iyadoo la adeegsanayo wax-soo-saarka hadda la goostay. Safarku wuxuu dhex maraa Baguio-La Trinidad-Itogon-Sablan-Tuba-Tublay (BLISTT) oo leh goobo dalxiis oo beeraha ah oo ku yaal Beerta Benguet Agro-Eco ee Sablan iyo UM-A Farm ee Tuba. Martidu waxay soo qaadan karaan wax -soo -saarkooda waxayna ka qaybqaadan karaan dabbaaldegga dhaqanka bulshada agagaarka dab -damiska iyadoo ay jirto hawo buur oo cusub.
Tallaabooyinka badbaadada ee caadiga ah
Waxqabadyadan ayaa sugaya ku -noqoshadaada Filibiin halkaas oo diirimaadka waddanku ku habboon yahay soo -dhoweynta maxalliga ah. Kobci waayo -aragnimadaada socdaalka adiga oo isku dayaya waxqabadyadan cusub oo ay si joogto ah u soo saartay DOT. In kasta oo dunidu sugayso in dib loo furo, shaqaalaha dalxiiska Filibiin waxay qaadanayaan tababar joogto ah. Dhismayaashu waxay ka hirgeliyaan guryahooda ilaalada caadiga ah si loo ilaaliyo martidooda iyo shaqaalahooda, si loo hubiyo in kuwa la aqoonsan yahay oo kaliya loo oggol yahay inay furaan oo qaabilaan martida.
DOT waxaa Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka ku abaalmariyay Shaambad SafeTravels ah oo ay ku ansixisay “hab -maamuusyada caafimaadka iyo nadaafadda ee caalamiga ah” oo hubin doona safar ammaan ah inta lagu jiro aafada.
Dawladda Filibiin iyada oo adeegsanaysa Guddi-hoosaad-ka-dhex-dhexaadinta Hay'adda ee Maareynta Cudurrada Faafa ayaa si joogto ah u cusbooneysiisa hab-maamuuskeeda si loo ilaaliyo socdaalayaasha.
Si aad u ogaato cusboonaysiinta ugu dambaysa iyo la -talinta safarka ee ku saabsan booqashada Filibiin https://www.philippines.travel/safetrip